उडिरहेको विमानमा कु टा कु ट : पाइलटको दाँत झर्यो, फ्लाइट एटेन्डेन्टको हात भाँच्चियो | Rochak
April 17, 2021 NepstokLeaveaComment on उडिरहेको विमानमा कु टा कु ट : पाइलटको दाँत झर्यो, फ्लाइट एटेन्डेन्टको हात भाँच्चियो
एजेन्सी । उडिरहेको विमानमा पाइलट र कर्मचारीबीच भएको कु टा कु टको घटना एयरलाइन्सले ढिलो गरी जानकारी गराएको छ । चीनको दोङहाई एयरलाइन्सका पाइलट र फ्लाइट एटेन्डेन्टबीच यस्तो घटना भएको छ।
पाइलटको दाँत झरेको छ भने अर्का कर्मचारीको हात भाँचिएको बताइएको छ । यो घटना फेब्रुअरी २० तारिखमा भएको हो । साउथ चाइना मार्निङ पोस्टले घटनामा पाइलटको दाँत झरेको र फ्लाइट एटेन्डेन्टको हात भाँच्चिएको पुष्टि गरेको हो ।
गत फेब्रअरी २० मा भएको यस घटनाको बारेमा आइतबार एयरलाइन्सले जानकारी दिए पछि सार्वजनिक भएको हो।। विमान ल्यान्ड हुन ५० मिनेट अगाडि पुरुष पाइलट र पुरुष फ्लाइट एटेन्डेन्टबीच विवाद सुरु भएको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा हात हालाहालको अवस्थामा पुगेको हो ।
फ्लाइट नम्बर डीजेट६२९७ को विमान नानतोङदेखि सियानका लागि उडिरहेको थियो। सोही क्रममा विवाद भएको थियो। हाल विवादमा भाग लिने दुवैलाई निलम्बन गरिएको छ। एससीएमपीका अनुसार पाइलट बाथरुममा थिए।
त्यसबेला फर्स्ट क्लास क्याबिन प्यासेन्जरका एक यात्रुले पनि सोही बाथरुम प्रयोग गर्न चाहिरहेका थिए। पाइलटले आफ्नै स्थानमा गएर पालो पर्खन भन्दासमेत यात्रुले अटेर गरेपछि पाइलटले नजिकै रहेका पुरुष फ्लाइट एटेन्डेन्डलाई काम राम्रोसँग नगरेको भनेर झपारेका थिए। सोही क्रममा भनाभन हुँदै जाँदा हात हालाहाल भएको थियो।
भाइरल हुँदै बौद्ध पिपलबोटको ‘डोको बजार’
May 13, 2021 Nepstok
दुबइमा नग्न पोज दिने ४० महिलाहरुबारे खुलासा, उनीहरु को थिए ? किन र कहाँबाट आए ?
April 7, 2021 April 7, 2021 Nepstok